Umugqa we-Flaskless Mouldind
Ungakulawula kanjani ukushisa kohlelo lokulawula umfutholuketshezi lomshini wokubumba othomathikhi?
1. Ukulawula ukushisa okupholile komoya Imishini eyisishiyagalolunye yokucindezela u-hydraulic isebenzisa le ndlela yokupholisa uwoyela wokubacindezela, ehlukaniswe izindlela ezimbili zokupholisa. Enye ixhunywe ochungechungeni nohlelo oluphambili lwe-hydraulic yomshini wokubumba futhi ngokuyisisekelo ifakiwe kulayini wokubuyisa uwoyela ukupholisa i-hydrauli ...
Izinqubo zokusebenza zomshini wokubumba othomathikhi:
1.Thobela izinqubo zokusebenza jikelele zomshini wokubumba nomshini wokwenza umongo. 2. Induku ye-ejector kufanele ibe ngokuqinile nangokuvumelanayo lapho kukhishwa umshini wokubumba. Ngaphandle kwalokho, yazisa abasebenzi bezondlo ukuthi bazoyilungisa. 3. Lapho umshini wokubumba ucindezelwa ku-ti yangempela ...
Izinqubo zokusebenza ze-Fully Automatic Molding Machine:
1.Thobela ukusebenza jikelele kwezobuchwepheshe kanye nokuphathwa kwemithethonqubo yokubumba nemishini yokwenza ingaphakathi. 2. Lapho umshini wokubumba usesikhunjini, induku ye-ejector kufanele izinze futhi ivumelaniswe, uma kungenjalo, yazisa abasebenzi bezondlo ngokulondolozwa. 3. Lapho udini ma ...
Ukwakhiwa kwesakhiwo somshini wokubumba othomathikhi
Isakhiwo sangaphakathi se-fuselage: i-fuselage isakhiwo esiqinile esingenalutho, esakhiwe yi-10mm-12mm plate welding technology, futhi ingxenye engenhla ixhunyaniswe kakhulu nengalo ejikelezayo nge-shaft emaphakathi, ingcindezi yokusebenza ngamandla amakhulu kanye namabhere wokusekela ukujikela phakathi kwe ...
Indlela ukukhetha othomathikhi udini umugqa?
Ukukhethwa kwendlela yokumodela kufanele kususelwe kuzinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi: (1) Ukunemba kokulingisa: Lapho ukunemba kwesibalo sosayizi wesakhiwo sokuphakama kuphezulu, futhi ubukhulu bendawo bungadingeka ekusakazweni, indlela yokumodela yokwenza ukubumbana kwesihlabathi esiphakeme ...
Izinzuzo eziyisishiyagalombili othomathikhi udini umshini
1. Umshini wokubumba usebenzisa imishini yokunemba okuphezulu, i-microcomputer, kanye nokuxhuma kwesistimu yokuthola indawo, etholakala ngokuphelele, elula ukusebenza, abasebenzi bangafunda ngokushesha ukusebenza, futhi ukusebenza komshini kungabukwa ngumuntu oyedwa kuphela. Ikhwalithi yokubumba izinzile, iyunifomu ...
Ungahlola kanjani umshini wokubumba othomathikhi emsebenzini?
Ngemuva kokuthi kusetshenziswe umshini wokubumba isikhathi esithile, ikhanda lomshini lizoshintsha kancane bese lihamba kancane, okuthinta ukusebenza kahle komsebenzi. Ngalesi sikhathi, sinabafundi kuphela abahlolisise umshini wokubumba ngokucophelela, bahlaziya imbangela yesimo esingajwayelekile enkampanini, kanye ...
Ukuze uthuthukise ukunemba komshini wokubumba othomathikhi, imiphetho emincane yasentwasahlobo yomugqa wokuvalelana iphethwe futhi icutshungulwe kahle. Umshini wokubumba usebenza ngokushelela nangokuthembekile, futhi uhlelo lwe-hydraulic luqhuba ukusebenza okuphephile. Imishini ifakwe i-manipulator, enciphisa ...
Iphutha ukuxilongwa izinyathelo kohlelo wokubacindezela of othomathikhi udini umshini
Kunamaphutha amaningi ohlelweni lokubacindezela lomshini wokubumba othomathikhi. Isibonelo, ukungcoliswa kukawoyela kungadala ukucindezelwa kokusebenza kohlelo lokulawula umfutholuketshezi, ukugeleza noma ukuqondiswa kokungasebenzi kahle, futhi kulethe ubunzima obukhulu ekuhlolweni kwephutha lohlelo lwe-hydraulic. Isinyathelo esilandelayo ...
Yiziphi izingqinamba okufanele zicatshangelwe lapho ukwakheka komugqa wokubumba okuzenzakalelayo?
1. Ukukhethwa kwemishini emikhulu nokusizayo yomugqa wokukhiqiza webhizinisi lokubumba nokuhlelwa kolayini wokukhiqiza. Uhlobo lwezinto ezithinta kakhulu ukwakheka kokumodela, njengesihlabathi esijwayelekile sobumba, isihlabathi se-sodium silicate nesihlabathi se-resin; ukumodela indlela yocwaningo ...
Yiziphi izizathu ezenza umshini othomathikhi wokubumba ungashaqeki?
1. Ngenqubo yokuthola ukwehluleka komshini wokubumba, isihlungi somoya sivinjiwe. Ngoba ipompo ye-vacuum ingakhiqiza amanzi athile ngesikhathi senqubo yokuthuthuka, into yokuhlunga kusihlungi somoya izovinjelwa ngokungeza okuthile kwangaphandle kwephayiphi isikhathi eside. ...
Ukubhekana nokwehluleka okutholakele lapho usebenzisa umshini wokubumba othomathikhi ngokuphelele
1. Ngenxa yokudlidliza kwesikhathi eside, amathuba entuthuko okubumba ayaqhubeka ukuvela. Ukwehluleka komshini wokubumba olandelayo: Izikulufo eziyisithupha ze-M20 hexagon socket ezixhuma ithebula lokudlidliza ne-vibration piston ziyadedelwa, ukuze kube negebe phakathi kwetafula lokudlidliza ne-piston s ...
Semi-okuzenzakalelayo Molding Machine, Punch Out Umshini, Flask Ukubumba, Flask Isikhunta Machine, Umshini wokubumba, I-Sandbox,